Isika mijery Blackjack ho toy ny anankiray amin'ny mpahay lalao amin'ny lalao Casino izao tontolo izao. Talohan'ny ny fiavian 'ny aterineto, Blackjack Tena malaza amin'ny tany mifototra amin'ny trano filokana. Ny fiavian 'ny aterineto no nanao izany lalao mora kokoa ny olona na aiza na aiza ao amin'ny izao tontolo izao. Ny tahan'ny ny aterineto lalao dia niavaka namorona Mampanembona ny tany-monina lalao. Fa ny ankamaroan'ny olona, mandeha ho any amin'izay tany ara-Casino dia efa azo atao. Ny ahiahy mikasika ny dia lavitra, ilaina sy ny sisa mampatahotra azy ireo eny. Soa ihany, NetEnt no afaka hitondra ny tany lalao ara-tsara ho any an-tranon'ny Gamers amin'ny alalan'ny Live Blackjack 2.
Momba ny Developer ny Live Blackjack 2
NetEnt efa aminay elaela. Efa manodidina ny hatrany indray toy ny 1996. Zavatra tsy developer manana antokony telo: NetEnt-tserasera Casino, NetEnt Touch sy NetEnt velona Casino. NetEnt-tserasera Casino dia mikasika ny fampandrosoana ny mahazatra lalao an-tserasera izay mitaky ny mpilalao sy ny solosaina lamba. NetEnt Touch dia mifanaraka amin'ny fampandrosoana ny lalao izay azo jerena amin'ny fitaovana finday. NetEnt Live trano filokana no mandroso lalao mba hitondra ny tany-monina lalao traikefa amin'ny aterineto lalao Casino izao tontolo izao. Live Blackjack 2 mora mianjera ao ity sokajy ity.
Live Blackjack 2 dia lalao avy NetEnt fa amim-pahombiazana dia midika ara-tany lalao traikefa amin'ny aterineto. Miaraka amin'ity lalao, mpilalao dia afaka hiresaka amin'ny hafa mpilalao ary afaka mahita ny croupiers manao ny zavatra velona.
Izany dia manome anao ny fahafahana mifidy ny croupier izay tsapanao fa ho tena mifanaraka amin'ny vintana.
Lafiny iray tsy manam-paharoa ao amin'ny slot dia ny hoe afaka mametraka filokana tamin'ny mpilalao hafa. Rehefa mametraka ny loka tamin'ny mpilalao hafa, ianao mbola tsy voatery ho nilalao teo amin'ny latabatra. Amin'ny alalan'ny fametrahana ny loka ny mpilalao hafa, ny fandreseny na very ho nanapa-kevitra ny amin'ny fomba tsara ny mpilalao manao ny fanapahan-kevitra eo amin'ny latabatra blackjack.
Izany manampy malalaka kokoa ny fientanam-po isan-karazany ny gameplay. Izany ihany koa ny manala ny fanerena ny fanapahan-kevitra eny an-tsorony. Na dia, ny fihenjanana dia be mainka. Na inona na inona, izany no fomba tsara mba hahazoana bebe kokoa ary mety mahafinaritra vola bebe kokoa avy amin'ny gameplay.
Rehetra ny vokany, ny mpandraharaha ity lalao hanao asa tsara ao nitondra ny lalao traikefa avy Vegas ao amin'ny solosaina efijery. ankehitriny, lalao an-tserasera dia ny zava-drehetra mety ho.